Oromo Views & Headline News: 1/1/12 - 1/8/12
IBSA EJJENNOO HOOGGANOOTA FI MISEENSOTA ABO
KAAYOON BILISUMMAA OROMIYAA GURGURAMUU HIN HAYYAMNNU
Umanni Oromo eega biyya Oromiyaa humna waraana habashootan saamame, waggaa dhibba caalaa tahun beekamaa dha.Weerara habashoonni Oromiyaa irratti banan ifirraa ittisuu dhaaf wareegama gudda fi qaalii kan akka harka, miila, harma fi mormaa muruu kafaleeti jira. Akkasumatti kiyyo gabrummaa jalaa bahuu dhaaf hanga ammaatti wareegama qaalii kana kafalaa akka jiru seenaan diddaa gabrummaa sirritti ibsiti.
Habashootiin gargaarsa meeshaa baranee biyyoota alaa irraa arkataniin Oromiyatti dulanii eega cabsan booda, Oromoon gabrummaa jalatti kufe, biyya isaa irrattti alagoomee, gabrummaa hamtuu adunyaa irratti hiriyaa hin qabne mudate. Oromoon araddaa fi qe'ee isaa keeysatti akka bineensa bosonaatti aloolame ajjeefame, akka beeyladaatti dhimma itti bahame. Gabra fijaa hin qaabne ka hojjatee nafxanyaa Amaara gabbaru, kan osoo ilmaan isaa beelaa, daaraa fi doofummaan hubamanii, ilmaan nafxanyaa nyaachisuu fi barsiisuu dhaaf dirqamu tahe. Walumaa galatti roorroo fi miidhaa ilma namaa mudachuu hin qabne nafxanyoonni Oromo irraan akka gahan seenaan ni mirkanneysiti.
Haa tahuu malee, ummanni Oromoo hiree argamte hundaatti dhimma bahee, gabrummaa habashootaan isaan mudatte fonqolchee ifiraa kaasuu dhaaf, yaroon qabsoo irraa harka maratee taa'ee hin jirtu. Arralee, qabsoon Oromiyaa harka gabroomfataa habashaa jalaa walaboomsu dhaaf godhamtu itti fufaa jirti. Hanga Oromiyaan walaba taatuu, hanga ummanni Oromoo bilisa tahe hiree isaa dhiibaa takkaan maletti murteeyfatu qabsoon Oromiyaa walaboomsuu fi ummata Oromo bilisoomsuu dhaaf, kaayoo ABOn labsamte wareegama qaqqaalii kamillee yoo gaafattee hamma galiin fiixa baatuu qabsoon itti fufti jenne amanna.
Akkuma beekamutti, nuti miseensotiin ABO, bara 2008, keessa rakkoolee dhaaba keenya fuula dura deemuu dhoorkan irra aanuu dhaa fi furmaataas itti barbaadu dhaaf dhaaba keessatti jijjiirama hundee labsuun keenya ni yaadatama. Labsa jijjiirama kana irra kan ka'ee miseensota fi hoogganni dhaaba bakka lamatti qoodamuun, ABOn rakkoolee addaa keessa seenuun waan beekkamaa ti. Rakkoolee jaarmaya keessatti nu mudatan tanneen wal’aanuu dhaaf tattaafiin adda addaa godhamanillee haga ammaatti raakkoolee tanneen irra aanuun hin dandayamne. Kun tahuun qabsaawota, sabboontotaa fi ummata Oromoo bal'aa hamilee caphsuun waan dhokataa miti.
Dhugaan jirtu osoo tana taatee jirtuu, nu miseensota jijjiiramni hundee ABO keessatti arkamuu qaba jenee kaane, haallan ifirraa hin eeyne, haallan ni taha ja'amee hin yaadamin nu mudatee jira. Haallan kanneenis haallan gaddisisoo fi haallan murnoota maqaa ABO himatan kamillee irraa hin eegamne.
Hoogganootiin hagoon ABO (Jijjiirama) geggeesan,
1 Kaayoo Adda Bilisummaa Oromoo tan (Kora Sabaa tiin bara 2004 tumamte) heeraa fi seera dhaabatiin alatti jijjiiruun,
2 Kaayoo Itoophiyaa dimokraateysuu akka kaayoo dhaabaatti fudhachuu dhaan qabsoo ummata Oromoo xurree irratti jaaramte irra fageeysuu dhaaf, afanfaajjii hammana hin je'amnne ummata Oromoo keeysati akka uumamu godhuun.
3 Sabboonummaa Oromoo kolaasanii, Habashaaf guggufanii, qabsoo bilisummaa Oromiyaa dura dhabachuu dhaaf murteefachuun,
4 Fedhii saba Oromoo irra fedhii Habashoota mirkaneeysuuf, Habashaaf irree tahuu filatani waan murteeyfatanif jecha,
Nuti, hooggantoonni fi miseensoonni dhaaba tarkaanfiilee asi gaditti tareeyfaman fudhanee jirra.
1. Hoogganoota dhaabaa kanneen kaayoo Itoophiyummaa filatan arra irraa jalqabee akka hoogganoota dhaabatti isaan hin beeynu.
2. Kaayoo Itoophiyummaa tan farra bilisummaa Oromiyaa ta namoota waa xiqqoon maqaa ABOtiin labsamte tana waan dandeenyu hundaan dura dhaabanna.
3. Nuti miseensoota fi hooggantoonni tarkaanfii tana fudhanne, dhaaba keenya akka kaayoo isaa irratti deebi'ee qabsaawu miseensota dhaaba waliin taanee qabsoo teenya ta Oromiyaa blisoomsuu,ta ummata Oromoo abbaa biyyaa taasisuu itti fufna.
4. Namoota Kaayoo dhaaba jijjiiranii kaayoo Itoophiyummaa (kaayoo Habashootaa) Oromoo irratti deebisanii mootomsuu filatan miseensotiin dhaaba, sabboontotiin Oromoo fi ummanni Oromoo bal'aan akka dura dhaabatan yaamicha goonaaf.
Dhaabni keenya dhaabolee Oromoo walaba tahani fi moraa qabso bilisummaa oromiyaa keeysa jiran wajjiin qabsaawuu dhaaf qophii dha. Tanaas hujiin mirkaneeysuu dhaaf Koonfirensi Araaraa fi Dadaa Tokkummaa hatattamatti akka godhamu dhaaboolee bilisa tahani fi qabsaawoota hundaafuu yaamicha keenya ulfinaan dabarsina.
Nuti miseensoonni maqaan keenya armaa gaditti tareeyfame murtiin tun teenya akka taate mirkaneeysina.
1. Ibrahim Muumme, Miseensa gumii sabaa fi miseensa KHR, Dubbataa Dhaabaa.
2. Damsho Ali, Miseensa gumii sabaa, itti gafatamaa Birkii Siyassa.
3. Abdi Ibrahim (Rushi), Miseensa Gumii Sabaa, Itti gaafatamaa Birki Jaarmaya Biyya Alaa.
4. Samiya Usman, Miseensa Gumii Sabaa itti gaafatamtuu Dhimma Dubartootaa.
5. Ahmed Ibroshee, Miseensa Birkii Siyaasaa
6. Abbaa Abdii miseensa Koree Jaarmayaa
7. Diriba Hordofa, Miseensa GS,
8. Ahmed Yassin, Miseensa Koree Aadaafi Beeysisaa (waraabi)
Injifannoo ummata oromootif
Amajjii (January) 1, 2012
Posted by Oromia at 1:24 PM